मृ’ त्यु भएर घर लगिसके पछि दुई महिने शि’ शुमा को’रो’ना पु’ष्टि | Public 24Khabar
Home News मृ’ त्यु भएर घर लगिसके पछि दुई महिने शि’ शुमा को’रो’ना पु’ष्टि
काठमाडौं । उपचारका क्रममा निधन भएर घर लगिसकेपछि एक दुई महिने शि’शुमा को’रो’ना पु’ष्टि भएको छ । झापाको मेची प्रा’दे’शि’क अ’स्प’ता’ल भ’द्र’पु’रमा मृ’त्यु भएका दुई महिने शिशुमा कोरोना पुष्टि भएको छ।
आफन्तले अस्पतालबाट शिशुको श’व बुझेर घर लगेको तीन घण्टापछि कोरोना पु’ष्टि भएको हो। घर लग्दा सम्म शिशुमा को’रो’ना भएको थाहा थिएन । ३ घण्टा पछि अस्पतालवाट कोरोनाको रिपोर्टवारे जानकारी आएपछि स्थानिय डराएका छन् ।
भद्रपुर नगरपालिका–८ का शि’शुमा निमोनियासँगै श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएपछि मंगलबार बिहान अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। शिशुमा कोरोनाको ल’क्षण देखा परेपछि दिउँसो १२ बजे स्वाब सं’कलन गरिएको थियो। स्वाब लिएको ६ घण्टाभित्रै शिशुको उपचारको क्रममा मृ’त्यु अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
परिवारजनले शव बुधवार दा’ह’सं’स्कार गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, नगर स्वा’स्थ्य शाखाले शिशुको दा’ह’संस्कार लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउन लागेको नगर स्वास्थ्य शाखाका फोकल पर्सन मनोज भट्टराईले जानकारी दिए।
Previous articleमु* टु का प्ने घ` टना,आफ्नै भिनाजुले मा` रे`र मकैबारिमा ब`ला`त्कार पछि फ्यालिदिएको शं*का (हेर्नुस् भिडियो )
Next articleभाईरल प्रह*रीको फन्दामा नक्कली कार्ड र बहाना गरेर हिँड्नेहरु ! सडकमै चर्का*चर्की, औषधि भनेर पाउरोटी… (भिडियो हेर्नुहोस्)
अब नेपाली महिला पनि भारतीय सेनामा भर्ती हुन पाउने ! (जानकारीका लागि सेयर गराै)
निशालाई भेट्दा रो’इन आँचल शर्मा ! जनता बचाउन Paul Shah पुगे घर घरमा, एकैदिन ५ हजार जि’ते को’रोना, (भिडियो हेर्नुहोस)
बि’हे भाको २७ दिनमै बिष्णु मृ’त फेला, दाइ’जोको कारण यस्तो भयो भन्दै माइती मिडियामा Bishnu Baral , भिडियो हेर्नुहोस (न्यायका लागि सेयर गराै)
अब नेपाली महिला पनि भारतीय सेनामा भर्ती हुन पाउने ! (जानकारीका...
निशालाई भेट्दा रो’इन आँचल शर्मा ! जनता बचाउन Paul Shah पुगे...
बि’हे भाको २७ दिनमै बिष्णु मृ’त फेला, दाइ’जोको कारण यस्तो भयो...